धनकुटामा पहिरोका कारण ७ घर र एक विद्यालयमा क्षति, हिले भोजपुर सडक अवरुद्ध - समाचार - कान्तिपुर समाचार
धनकुटामा पहिरोका कारण ७ घर र एक विद्यालयमा क्षति, हिले भोजपुर सडक अवरुद्ध
असार २८, २०७६ रमेशचन्द्र अधिकारी
(धनकुटा) — अविरल वर्षाको कारण धनकुटाको अधिकांस स्थानको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । पहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा ७ घर सहित एक विद्यालय र एक प्रहरी चौकिमा समेत क्षति पुगेको छ ।
महालक्ष्मी नगरपालिका ५ लेगुवा बजारमा आज बिहान तीन घरमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । कपडा पसल गर्दै आएका महम्मद अनुवारको कपडा पसल र घर भत्किदा करिब ९ लाख बराबरको क्षति भएको छ । सोहि स्थानका इन्द्रसागर दास, राजकुमार बुढाथोकीको घरमा समेत पहिरोले क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुदर्शन कोइरालाले जानकारी दिए ।
आसपासका अधिकांस घर उच्च जोखिममा रहेको स्थानीय सन्तबहादुर कुँवरले बताए । महालक्ष्मी नगरपालिकाको जीतपुर बजारस्थित प्रहरी चौकी समेत पहिरोले जोखिम पुगेको छ । यस्तै, पाख्रिबास नगरपालिका ५ स्थित घोर्लिखर्कमा तीन घरमा क्षति पुगेको छ ।
अविरलको वर्षात्का कारण पहिरो जाँदा धनकुटाको पाख्रिबास ४ स्थित एक जोखिमपूर्ण घर । तस्बिरः रमेशचन्द्र अधिकारी/कान्तिपुर
स्थानीय युवराज कार्की, चक्रबहादुर निरौला र ५ का वडाध्यक्ष गोपालबहादुर थापाको घरमा पहिरोले क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । धनकुटा नगरपालिका ७ चुलिबनका लक्ष्मी लावतीको घरमा पनि क्षति पुगेको छ । सहिदभूमि गाउँपालिका ३ मा रहेको अजम्बरी प्राथमिक विद्यालयको भवन भत्किदा पठनपाठन बन्द गरिएको प्रअ राईले बताए ।
यसैगरी, मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत हिले—लेगुवा—भोजपुर सडकमा दुई दिनदेखि यातायात अवरुद्ध भएको छ छ । मुलघाट–त्रिवेणी सडक, तमोर करिडोर र सिधुवा–लेगुवा सडक समेत अवरुद्ध भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले जानकारी दिए। घटनास्थलमा उद्धार र राहतको लागि पहल थालिएको उनले बताए ।
प्रकाशित : असार २८, २०७६ ११:२५
नदी कटानले कर्णाली पुलमा भ्वाङ पर्‍यो
असार २८, २०७६ कमल पन्थी
(बर्दिया) — कर्णाली नदीस्थित राजापुर र कैलाली जोड्ने पुलमा कर्णाली नदीको बहाव पूर्वतर्फ धकलिएपछि भ्वाङ परेको छ । कैलाली जोड्ने पूर्वी किनार पुलसँग जोडिएको ठाउँमा भ्वाङ परेको हो ।
गत वर्ष साउनमा आएको बाढीले पुलमा भ्वाङ परेको थियो । यस वर्ष दुई ठाउँमा भ्वाङ परेको छ । सडक दुर्घटना रोक्न पुलसँगै गाडिएको एउटा पिलर समेत ढलेको छ । कर्णालीमा जलस्तर बढ्दै गएका कारण पुल बचाउन बनाइएको तटबन्ध भाँसिदै गएको छ । ठुलो बाढी आउना साथ तटबन्ध भासिएर पुलसँग सडक सम्पर्क विच्छेद हुने राजापुर नगरपालिकाका मेयर शिव प्रसाद चौधरीले बताए ।
‘नदी कटान तिब्र भई रहेको छ,’ ‘उनले भने, ‘यसलाई रोक्ने प्रयास नगरिए बर्दिया र राजापुरसँगको सडक सम्पर्क विच्छेद हुने छ ।’
पुल बाट आउजाउ गर्ने सवारी साधनको गति नियंत्रण गर्न दुबै तर्फ किनारमा गेभिन राखिएको छ । दुई वर्ष अघि पुल निर्माण भएपनि हस्तान्तरण भएको छैन । कालिका–शर्मा रसुवा जेभी निर्माण कम्पनीले ५ सय ३१ मिटर लामो उक्त पुल निर्माण गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले करिब ४६ करोडको लागतमा निर्माण गरेको हो । भ्वाङ टालटुले गरी ढुंगा राखेर अस्थायी रुपमा बचाउने प्रयास गरेपनि ठुलो बाढी आए थेग्ने अवस्था छैन ।
हुलाकी सडक आयोजना अन्तर्गत पुल जोगाउन थप पिलर बनाउन करिब दुई करोड बजेट केन्द्रसँग माग गरेको थियो । वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट निकासा भएको छैन । थप पिलर नबनाए पुल बग्ने चेतावनी आयोजनाले दिएको छ ।
आयोजना प्रमुख युवराज पोखरेलले थप एक पिलरका लागि बजेट निकासा नभएको बताए । ‘हुलाकी आयोजना निर्देशनालयबाट यस बारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले भने, ‘पुल जोगाउन निर्माण गरिएको गेभिन भाँसिदै गएको छ ।’
प्रकाशित : असार २८, २०७६ ११:१४
सुदूरपश्चिममा संक्रमित तीन हजार नाघे
बलात्कारको झूटो जाहेरी दिनेलाई एक महिना कैद, ६३ हजार जरिवाना
ओलीले दाहाल र पौडेलसँग भने- अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्दिनँ
अधिवेशन अन्त्यको विरोधमा दलहरू- प्रधानमन्त्रीले संसद्‌माथि प्रहार गरे
अनशनरत युवालाई भेट्न अस्पताल पुगे प्रधानमन्त्री
नेकपाको एकतामा खतरा मडारिएकै हो त ?
अपडेटः बिहीबार, १८ असार, २०७७ । २१ : ०० बजे
अब खुल्ने विश्वविद्यालय कस्तो ?
सुरेशराज शर्मा असार १८, २०७७
विचार अलि उग्रवादी देखिन सक्छ तर सोचनीय पनि हुन सक्छ— अब कस्ता विश्वविद्यालय बन्नुपर्ला ? सीपमूलक शिक्षालाई साँच्चैको रोजगारीमूलक बनाउन के गर्नुपर्ला ? आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयलाई...
हचुवामा उद्धार र घरफिर्ती
जीवन बानिया असार १८, २०७७
कोरोना महाव्याधि, यसले खास गरी नेपाली आप्रवासी श्रमिकमा पारेको प्रभाव र सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको सम्बोधनका लागि सरकारी स्तरबाट छुट्टै संयन्त्र वा कार्यदल बन्नु र त्यसले...
गाउँका लागि सहर
चन्द्रकिशोर असार १८, २०७७
सहरप्रति विश्वास बढ्नाले गाउँहरू रित्तिएका थिए, जसलाई कोरोना कहरले क्रमभंग गर्‍यो । थातथलो छाडेर रातारात कोही सहर छिरेको थिएन । गाउँका आधारहरू कमजोर पार्ने खेलको परिणति थियो,...
रामेश्वरी पन्त असार १८, २०७७
जेठ महिना अत्यन्तै अप्रिय रह्यो । जातीय अहंकारको पराकाष्ठा रुकुम नरसंहार होस् या आपराधिक मानसिकताको उपज रूपन्देहीको तिलोत्तमाको गाई फार्ममा भएको सामूहिक हत्या, रूपन्देहीको तिलोत्तमाकै ९...
सम्पादकीय असार १८, २०७७
जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बन्न सकिने प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेपछि उब्जिएको बहसलाई सामान्य रूपमा पन्छाउन मिल्दैन । परराष्ट्र संयन्त्रमा द्विपक्षीय...
एमसीसी : नेपालको बिब्ल्याँटो बाटो
मेरी डेसेन असार १७, २०७७
बेलायतको द्विपक्षीय सहायता एजेन्सी ‘डीएफआईडी’ भर्खरै उसको परराष्ट्र कार्यालयमा गाभिएको छ । उता संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने आफूले प्रदान गर्ने वैदेशिक सहायतालाई आफ्नो परराष्ट्र निकायबाट...
भय बेच्ने उपक्रम !
सीके लाल असार १७, २०७७
अपेक्षा गरेभन्दा धेरै बढी सफलता हात पारेपछि औसत व्यक्तिमा अत्यधिक अभिमान (ह्युब्रिस) उत्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यताका उदाहरण नेकपा दोहोरोका सर्वेसर्वा, खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार एवं...
खाद्य समृद्धिको ढाँचा
कृष्णप्रसाद पौडेल असार १७, २०७७
नेपालको समकालीन राजनीतिका क्षेत्रमा समाजवादी चिन्तन–मनन र विश्लेषणमा छुट्टै पहिचान बनाएका नेकपाका नेता, मार्क्सवादी विश्लेषक तथा प्रखर वक्ता घनश्याम भुसाल कृषि तथा पशु विकासमन्त्री बनेको...
पराक्रमी ‘सिंगल’ हरू
शीतल दाहाल असार १७, २०७७
‘अविवाहित महिला संसारकै खुसी’, ‘एक्लो हुनु सृजनात्मक हुनु हो’, ‘अविवाहित हुनु आफ्नो मर्जीको जीवन जिउन पाउनु हो’ शीर्षकका लेख सामाजिक सञ्जालमा जब आइपुग्छन्, तब ती...
दृष्टिविहीनलाई बैंक दुर्गम
लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली असार १७, २०७७
दृष्टिविहीनहरूले मुद्रा पहिचान गर्न सक्दैनन् भन्दै खाता खोल्ने चरणदेखि नै बैंकहरूले भेदभाव गर्दै आएका छन् । नेत्रहीनहरूलाई बैंक खाता खोल्न, पैसा राख्न वा झिक्न अभिभावक चाहिन्छ ।...